ICedar Suite-Rustic & Tranquil Suite eManitou Lodge
I-Rustic Lodge Suite kwiSetting Tranquil
IManitou Lodge inamagumbi amabini amagumbi amabini aneebhedi zokumkanikazi kuwo omabini amagumbi kunye negumbi lokuhlambela elineshawari. Umnyango weglasi otyibilikayo ungasemva ukhokelela kwipatio egqunyiweyo. Iindonga ze-Douglas fir kwigumbi elincinci kunye ne-salvage-cedar / driftwood trim kulo lonke ibonelela ngokuziva okufana nekhabhathi. Izilwanyana zasekhaya zivumelekile kweli gumbi, nceda usebenzise ithebhu yomrhumo wesilwanyana phezulu kwiphepha lokubhukisha kwi-intanethi ukongeza umrhumo ofanelekileyo ngexesha logcino lwakho. Amaxabiso asekelwe kukuhlala kabini, iindwendwe ezongezelelweyo zii-$30 inye, iindwendwe ezi-4 zinobuninzi obunokuhlala. AKUKHO ABANTWANA ABANGAPHANSI KWE-10 KWELI GUMBI.
IManitou Lodge ime ngokugqibeleleyo kwiForks, eWashington. Indawo yethu yokuhlala ibonelela ngamagumbi eendwendwe, iikhabhinethi kunye neenkampu kwiihektare ezilishumi zehlathi elinemvula elunxwemeni, iikhilomitha nje ezi-3 ukusuka eRialto Beach, kunye nemizuzu eyi-15 entshona yeForks. IManitou yeyona nto ifanele ukuba yindawo yokulala - iinkuni, ilitye, iGumbi eliKhulu elinendawo yomlilo yamatye amakhulu, iisilingi ezigudileyo, kunye nefanitshala onokubeka kuyo iinyawo zakho phezulu. Ubusuku kwihlathi lethu buthe cwaka ngaphandle nje kokungxama okude komlambo iSol Duc kunye nokuphazanyiswa ngamanye amaxesha ziicoyotes nezikhova.
Yakhelwe okokuqala ngo-1970, indawo yethu yokulala yeeForks WA yakhiwe kufutshane nesakhiwo sokulala sakudala esinendawo enomtsalane liGumbi elikhulu elinesilingi elinendawo yomlilo yamatye. Iibhedi ezininzi kunye nezitulo kweli gumbi zibonelela ngendawo yokuhlala nabanye, kwaye, kwangaxeshanye, ukuba ngasese. I-Lodge ikwalikhaya kwiVenkile yethu yeZipho ethandekayo ebonisa ubugcisa bomthonyama baseMelika kunye nePacific Northwest, ihobho, ubucwebe nokunye.
Hamba ngaphandle kwaye ube namava kwiPacific Northwest
Imi kwiihektare ezilishumi zehlathi eliselunxwemeni, indawo yethu yokulala yeeForks WA imalunga nokuya ngasentshona njengoko unokufika kumazantsi angama-48. Iihemlock zepropathi kunye nespruce zisasebenza, kwaye kukho iWestern Hemlock kwipropathi engaphezulu kweminyaka eyi-1000 ubudala. Imihlaba ibandakanya iindlela ezimangalisayo, amasuntswana e-whimsy kunye neendawo ezithandekayo zepikiniki.
Ehlotyeni kumnandi kukukhanya kwelanga kunye namaqondo obushushu angafane anyuke ngaphezu kwama-80 F. Ebusika kuza iintlanzi. Imilambo yasekuhlaleni (i-Sol Duc, i-Bogachiel, i-Calawah, i-Hoh) inikezela nge-salmon ekumgangatho wehlabathi kunye nokuloba i-steelhead. Sikwajongene nezaqhwithi zasebusika ezinamandla ezibumba unxweme lwethu. Kufanelekile idosi yemvula kunye nomoya ebusweni ukungqina enye yezi, ngakumbi xa ibhedi, umlilo kunye nebhedi efudumeleyo zikude nje yimizuzu embalwa.
UZIJONGELE: Naliphi na ixesha emva kwentsimbi yesi-3pm (akukho kufika kwangethuba, nceda). Fumana ikhadi elinegama lakho kumnyango wangaphambili kwaye ulandele imiyalelo yokungena ngaphakathi. Ngokulula kokungena kwindawo yethu yokuhlala eForks Washington, unokuthatha ixesha lakho kwaye ufike kuncedo lwakho.
Kukho into yomntu wonke nangaliphi na ixesha lonyaka kwi-Olympic National Park kunye neeForks Washington. Jonga ulwandle lwasentlango olunje ngeRialto Beach, hamba kubuhle obugqunywe yimoss kwihlathi elinemvula laseHoh, loba imilambo emininzi yalo mmandla, okanye ukonwabele ukubukela. Iifolokhwe zikwalulungiselelo lwe-Twilight Saga, kwaye isingathe uMnyhadala we-Forever Twilight Festival rhoqo.
Sifumaneka kumgama nje wemizuzu engama-45 ukusuka eHoh Rainforest naseSol Duc Hot Springs, kwaye malunga neyure ukusuka eCape Flattery (eyona ndawo ikuMntla-ntshona kumaphondo angama-48 asezantsi) kunye neMyuziyam yeMakah kunye neNkcubeko eNeah Bay. Ulwandle lwaseRialto, olunomtsalane olugqwethekileyo kunye nelogu, luziikhilomitha nje ezi-3 kude. I-Quileute Tribe ihlala kwiikhilomitha ezili-9 ukusuka eLa Push, kunye ne-First Beach eLaPush kunye ne-Olympic National Park ye-Second and Third Beaches ye-Olimpiki (ungabhidaniswa neeLwandle 1-3 emazantsi eKalaloch).
I-Rialto Beach, ukuphela kwe-drive-ukuya elunxwemeni kwindawo ekufutshane, yindawo ekhangayo, i-driftwood-strewn beach kwicala elingasentla lomlambo i-Quileute malunga neekhilomitha ezi-3 ukusuka eManitou Lodge. I-surf idla ngokuba nzima, i-driftwood ikhula ibe mikhulu, kwaye ukutshona kwelanga kuhle kakhulu. I-Rialto crescent ifikelela malunga ne-1.5 yeemayile kwaye iphele ngeemfumba ezimbini eziphakamileyo zolwandle, amachibi olwandle, kunye ne "Hole-in-the-Wall", itonela eqingiweyo kwi-surf kwi-headland. Umgama oziikhilomitha ezili-18 ukunyukela emantla ukusuka eRialto Beach ukuya eCape Alava yeyona nto ithandwayo ngababhaka.
Okokuqala, iilwandle zeSibini kunye nezeSithathu zinwebeka emazantsi ukusuka emlonyeni woMlambo iQuileute. Ezi lwandle zinde, zithe tyaba ezithe tyaba ezithandwa ngabafoti ngenxa yobuninzi bolwandle (indawo eyaziwayo yolwandle, i-“Quileute Needles”, ihleli nje ngaselunxwemeni), amachibi olwandle, namaxhalanga. Ukufikelela kuLwandle lweSibini kunye nolweSithathu kufuna ukunyuka kwe-0.5 ukuya kwi-1.5 yeemayile, ngokulandelelanayo. Iindawo eziphambili kuLwandle lokuQala kunye noLwandle lweSibini azinakugqithiswa, kodwa umntu unokupakisha ubhaka emazantsi ukusuka kuLwandle lweSithathu ngaselunxwemeni malunga neekhilomitha ezili-17 ukuya kwisiXeko se-Oyile.
IZiko leeNdwendwe leHoh limalunga neekhilomitha ezingama-30 ukusuka kuthi, kwaye iHoh Rainforest inokuba ngumtsalane owaziwa kakhulu kwi-Olympic National Park. Umyinge wemvula yonyaka kwi-Hoh Valley ingaphezu kwee-intshi ze-150, kwaye inefuthe elimangalisayo kwizityalo. Ecaleni kweNdlela “yeHolo yeMosses”, iimaphu ezigqunywe ngobulembu ziluhlaza ngokugqithisileyo unyaka wonke, kangangokuba kukho umntu obhale ukuba umoya ubonakala unombala oluhlaza. I-Spruce Trail ilandela i-glacier-carved Hoh river maple kunye ne-alder ebomvu "ezantsi". Iihambo ze-Scenic raft ziyafumaneka ehlotyeni ecaleni koMlambo i-Hoh, kwaye izikhokelo zinokuvunyelwa unyaka wonke ngokuloba kunye nohambo olubukekayo.
Eminye imisebenzi yengingqi kufutshane neForks Washington ibandakanya ukuloba okukumgangatho wehlabathi, ukukhwela ibhayisekile ezintabeni, ukukhwela intaba kwiintaba zeOlimpiki kunye nonxweme olusendle olubandakanya inxalenye yoNxweme lwePasifiki lwePaki yeSizwe yeOlimpiki, okanye utyelelo eCape Flattery, eyona ndawo yaseMntla-ntshona asezantsi 48 ithi. Uhambo lokuhamba ngeenyawo olugqitywe kutshanje sisizwe sakwaMakah, esikumhlaba weKapa, lwenza lula kakhulu uhambo. Iimbono zeStraits zeJuan de Fuca, iSiqithi saseTatoosh, kunye neSiqithi saseVancouver ukusuka kumawa aseKapa ziyakhuthaza. Ngelixa undwendwela iKapa, awufuni kuphoswa liZiko leNkcubeko leMakah kunye neMyuziyam eNeah Bay. Ezi yisampuli nje zamathuba kwi-West End. Ukujonga ngakumbi, jongana namanye amakhonkco adweliswe ngezantsi kwaye u tyelele iForks Chamber of Commerce IsiKhokelo seentsuku ezintlanu ukuya kwi-West End. Abalandeli bakaTwilight abayi kufuna ukuphoswa yindawo yokumisa kwiiForks, WA.
Kukho into yomntu wonke nangaliphi na ixesha lonyaka kwi-Olympic National Park kunye neeForks Washington. Jonga ulwandle lwasentlango olunje ngeRialto Beach, hamba kubuhle obugqunywe yimoss kwihlathi elinemvula laseHoh, loba imilambo emininzi yalo mmandla, okanye ukonwabele ukubukela.
Eminye imisebenzi yengingqi kufutshane neForks Washington ibandakanya ukuloba okukumgangatho wehlabathi, ukukhwela ibhayisekile ezintabeni, ukukhwela intaba kwiintaba zeOlimpiki kunye nonxweme olusendle olubandakanya inxalenye yoNxweme lwePasifiki lwePaki yeSizwe yeOlimpiki, okanye utyelelo eCape Flattery, eyona ndawo yaseMntla-ntshona asezantsi 48 ithi. Uhambo lokuhamba ngeenyawo olugqitywe kutshanje sisizwe sakwaMakah, esikumhlaba weKapa, lwenza lula kakhulu uhambo. Iimbono zeStraits zeJuan de Fuca, iSiqithi saseTatoosh, kunye neSiqithi saseVancouver ukusuka kumawa aseKapa ziyakhuthaza. Ngelixa undwendwela iKapa, awufuni kuphoswa liZiko leNkcubeko leMakah kunye neMyuziyam eNeah Bay. Ezi yisampuli nje zamathuba kwi-West End. Ukujonga ngakumbi, jongana namanye amakhonkco adweliswe ngezantsi kwaye undwendwele iForks Chamber of Commerce IsiKhokelo seentsuku ezintlanu ukuya kwi-West End. Abalandeli bakaTwilight abayi kufuna ukuphoswa yindawo yokumisa kwiiForks, WA.
Izimvo eziyi-4 506